Xiisadii ka dhalatay dilkii Suldaan Xasan Cali Jibriil oo lagu soo afjary gobolka Sanaag – Radio Daljir
Noofember 2, 2018 12:49 g 0
Degmada Bardhan ee gobolka Sanaag waxaa goor dhawayd lagu soo gaba gabeeyay khilaafkii ka dhashay dilkii Suldaan Xasan Cali Jibriil oo ka mid ahaa salaadiintii gobolka Sanaag sida aadka ahayd looga yaqaanay .
Suldaanka ayaa u geeriyooday xabado uu ku soo furay askari ka tirsanaa ciidamada Booliska ee gobolka Sanaag, xili uu degmada ku sugnaa Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas 21-kii Bishii Setemper ee sanadkan.
Hadaba maxaa lagu xaliya khilaafkii ka dhex taagnaa labadii beelood oo ay ka soo kala jeedeen Suldaanka iyo Askarigii dilka geystay.?
Halkan ka akhriso qodobadii lagu heshiiyay .
1: Ergada kulanka ayaa la kulmay waxgaradka labada beelood oo ay ka soo kala jeedaan Sudaanka la dilay ee Suldaan Xasan Cali Jibriil iyo ninkii ka dambeeyay dilkiisa.
2: Markii ay dhageysteen Aragtida labada beelood ee Walaalaha ah
3: Markii la wareystay Maxamed Cali Sugule oo ah Ninkii dilay Suldaan Xasan Cali Jibriil.
4: Markii wadatashi dhinaca Shareecada Islaamka ah la yeesheen Culimada kala ah Sheekh Axmed Daahir Xasan Xuseen, Sheekh Maxamed Macalin Axmed, iyo Sheekh Salaad Maxamed Cusmaan.
Ergada ayaa aqbashay in waqti la siiyo si ay wadatashi u soo sameeyaan Odayaasha Beesha uu ka dhashay Suldaan Xasan Cali Jibriil,waxana ugu dambeyn waxgaradka ay shaaciyeen.
In ay cafiyeen Ninkii Suldaanka dilay ee Maxamed Cali Sugule,Sida Diyo,Dil iyo aarsi Intaba.
Ergada ku jirtay dhex dhexaadinta ayaa ku raacay Go’aanka cafinta ah oo ay qaateen beesha uu ka soo jeedo Alle ha u naxariistee, Suldaan Xasan Cali Jibriil sidaasi ayaana Shirkii mudada ka socday Magalada Badhan ee gobolka Sanaag lagu soo gaba gabeeyay.
Xalita khilaafkan ka dhashay dilka Suldaanka ayaa waxaa gacan wayn ka gaystay oo halkaasi gaaray shalay Isimo iyo Nabadoono uu hor kacaayay Boqor Burhaan Boqor Muuse , sida uu radio Daljir usheegay Afhayeenka Nabadoonada gobolka Sanaag.